OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: August 2012
အသစ် အသစ် အ၇င်ကသူတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ ..ပြောပြောနေကြလို့ ..
အရင်က ဘယ်သူတွေလည်း အခုကရော ဘယ်သူတွေမို့ လို့ လည်း။
“ပိတ်ပင်တားမြစ် ပိတ်ဆို့ တာတွေက အရင်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်တာ .. အခု ငါတို့အစိုးရလက်ထက် မဟုတ်ဖူး …”
“ဖမ်းဆီး ညဉ်းပမ်း နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်တာတွေ အရင်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်တာ .. အခု ငါတို့အစိုးရ လက်ထက်မဟုတ်ဖူး …”
“လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေ အရင်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်တာ .. အခု ငါတို့အစိုးရလက်ထက် မဟုတ်ဖူး …”
“တိုင်းပြည်ကို ဆင်းရဲမွဲတေ ချွတ်ခြုံကျအောင် လုပ်တာ အရင်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်တာ .. အခု ငါတို့အစိုးရလက်ထက်မဟုတ်ဖူး …”
“ငါတို့ငါတို့ က … အရင် မဟုတ် …. အင်း မဟုတ်ဖူး …..”
Laiza trip ‘eye-opener’ for civil society
Kachin Independence Army deputy chief of staff U Gun Maw speaks to leaders of civil society organisations and journalists in Laiza on July 7. Pic: Kaung Htet
CIVIL society leaders sayatrip to Kachin Independence Organisation-controlled areas of northern Myanmar last month has changed their perceptions of the conflict and the group.
A one-hour meeting on July7with leaders of the KIO and its armed wing, the Kachin Independence Army, was particularly eye-opening, said Ko Nay Myo Zin,aformer prisoner of conscience.
“I was surprised,” Ko Nay Myo Zin said. “Particularly by how transparent they were. The government should take them as an example. They told us openly why they are fighting with the Tatmadaw – what they want and what they are asking for from the government.”
Ko Nay Myo Zin established Myanmar Social Development Network immediately after being released from Insein Prison in January underapresidential amnesty. A former lieutenant in the Tatmadaw, where he served from 1994 to 2005, Ko Nay Myo Zin was arrested in 2010 under the Unlawful Association Act for his involvement with the National League for Democracy.
“If the Tatmadaw invites us to the frontline and explains the reasons it is fighting against the KIA, what the KIA has demanded and other things like this, then I think people will be able to better understand,” he said.
“Foralong time, what I was forced to believe while I was in Tatmadaw was the KIA is cruel,” he said. “But what they ask for is fair – to haveamore inclusive union … they want to change laws to be more inclusive in the Tatmadaw, like accepting ethnic minorities in the [Defense Services Academy]. Why hasn’t the government responded yet?”
The trip to Laiza, the KIO headquarters, was organised by Kachin Peace Network with the intention of giving civil society groups and journalists the chance to see the situation on the ground. Among those who took part in the July 4-12 trip were representatives from One More, Untied Network, Children Lovers, Myanmar Social Development Network, Yangon School of Political Science and The Myanmar Times.
U Pyi Thway Naing, the head of One More, which donated K7 million to camps for internally displaced people (IDPs) during the trip, said the chance to see conditions in the Laiza and Maijayang regions first-hand had been invaluable.
“It’s different from what I saw in the media,” he said. “I saw orphans whose parents were KIA soldiers and had died during the fighting. I saw an old woman who had been injured by landmine.”
One More, which was established in August 2011 and now has 14,000 supporters who donate K1000amonth to fund its activities, focuses on education and U Pyi Thway Naing said the schooling needs in the relief camps were “indescribable”.
“Even in normal situation, it’s not easy for them to go to school. Now they are living in these camps,” he said.
“Psychologically, I can feel that they are not okay either, because they are not in their own homes. And often parents can’t take care of their children. I want to do more for them having seen the situation with my own eyes,” said U Pyi Thway Naing, who is also editor of monthly magazine Ya Nant Thit (New Fragrance).
Dr Aung Nyein Chan, who like most participants was travelling to KIO-controlled areas for the first time, said it was much different from what he experienced volunteering in IDP camps in Myitkyina and Waingmaw townships for six months.
“I thought Myikyina and Waingmaw had many IDPs. But it’s only around 20,000, while there are more than 50,000” in KIO areas, he said.
“In the Myikyina-Waingmaw areas, the largest population inasingle camp is at most 3000. In Laiza, it’s almost 7000.
“I found the IDPs are suffering from malnutrition as they haven’t been able to eat properly … as they are weak, it’s easy for the IDPs here to catch from other diseases,” he said, adding that the crowded conditions meant diseases like tuberculosis could spread easily.
Doctors are in short supply and Dr Aung Nyein Chan warned that people living in the camps also need psychological support as they are inastate of “helplessness”.
Ko Nay Myo Zin said he was concerned that the conflict will lead to “racial hatred” because of the suffering inflicted, particularly on children.
He said he plans to submit his concerns to the Pyidaungsu Hluttaw and press representatives to takeastronger role in resolving the conflict.
“I think the international community should pressure the government more to focus on peace talks and negotiations,” he said.
“If the government doesn’t solve this problem now, the worries and fears of the people affected could exist for generations.”
Unstoppable Kachin war: Biggest question of Burma?
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 7:08 PM No comments:
Lata Matut Ndi Ndai Laru Kaba Hpe Jawm Shingla Padang Dip La Ga
Lani hte lani Myen Amyu sha Uhpung yawng ngu na daram Thein Sein Asuya hpe madi shadaw nhtawm KIO/KIA hpe lam amyu myu hku adawt kasat hpang wa nga masai..Egress, DASSK, Thant Myint Oo, 8888, Myen Media, Myen Human Rights Commission hte Myen Parliament ni gaw Thein SeinaMyen Amyu Kaba Mung Masa Shawnglam Hkali kaba hta jawm jawn nga masai..anhte Jinghpaw WP ni yawng Lata matut ndi, ndai Laru kaba hpe jawm shingla kasat awng dang hkra naw da-ting ga. Anhte maga de yawng mayawng hpe dangdi lu ai "Mastaw Lahta na anhteaWa" lawm nga sai majaw anhte hpa tsang na lam nnga ga ai...Ndai Laru hta anhte sum yang shawnglameJinghpaw WP ngu ai shingteng amying gaw Maumi langai hku nna sha ngam nga na hpe asan sha dum nga ga law...
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မီရှင်၏ တွေ့ရှိချက် မမှန်ကန်ဟု ကချင် ဒုက္ခသည် ကော်မီတီမှ ထောက်ပြ
Tuesday, 14 August 2012 19:47
ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းများ၏ အခြေအနေအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်သည် လက်တွေ့ ဖြစ်ရှိနေသော အခြေ အနေနှင့် ကင်းကွာနေပြီး တရားမျှတမှု မရှိဟု ကချင် ဒုက္ခသည်များ အရေး ဆောင်ရွက် ပေးနေ သည့် ဦးတွဲပီဇာမှ ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသို့ ပြောပါသည်။
“ သူတို့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်က မှန်လည်း မမှန်ပါဘူး။ သူတုိ့က အစိုးရက ထိမ်းချုပ်ထားတဲ့ ဒီမြစ်ကြီးနား နဲ့ ၀ိုင်းမော်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်း (၁၆) ခု ကိုဘဲ လေ့လာ တာပါ။ ဒါတောင်မှ ကျနော်တို့သိတဲ့ အခြေအနေ နဲ့ လွဲနေတယ်။ ပြီးတော့ KIO ထိမ်း ချုပ်တဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းကို မသွားဘဲနဲ့ ဒုက္ခသည်ရဲ့ အခြေအနေ တခုလုံးကို ခြုံပြီးတင်ပြဟန်ကို ယူထားတယ်ဆိုတော့ တရားလည်း မတရားပါဘူး” ဟု ဆိုပါသည်။
လက်တွေ့၌ ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေထဲမှ လိုင်ဇာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅၄,၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး အစိုးရ ထိန်းချုပ် နယ်မြေထဲတွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၂၄, ၀၀၀ ခန့်သာ ရှိပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော် မရှင်၏ အစီရင်ခံစာသည် အခြေအနေမှန်ကို တင်ပြနေခြင်း မဟုတ် ကြောင်း ကချင် ဒုက္ခသည်များ အရေးကိုဆောင်ရွက် ပေးနေသော ဒုက္ခသည် ကော်မီတီက ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ပြောသော လောက်ငှမှုသည် ဘာကို ဆိုလိုခြင်း မသိရပေ။ အစိုးရ ထိန်းချုပ်သော စခန်း များ၌လည်း ရိက္ခာများ သိုလှောင်ထားခြင်း မရှိပါဘဲနှင့် လောက်ငှမှု ရှိသည်ဟု ပြောနေသလို ဖြစ်နေပါသည်။ အစိုးရ ထိမ်းချုပ်သော စခန်းများ၌လည်း UNHCR ကသာ အများစု ထောက်ပံ့နေပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ နည်းတူသာ ပေးထားသည်ဟု UNHCR ကိုယ်စားလှယ် များမှ သိရကြောင်း ဦးတွဲပီ ဇာကဆိုပါသည်။
KIO ထိမ်းချုပ်သော နယ်မြေ၌ နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ပေးရေး အဖွဲ့များ (၅) ဖွဲ့မျှရှိပါသည်။ ၄င်းတို့သည် အခြေခံရိက္ခာများ ကိုပင်လောက်ငှစွာ မပေးနိုင်ဘဲ ယခုလို မိုးရာသီတွင်း၌ တလစာ နှစ်လစာ စသည်ဖြင့် သင့်တော်သလို ခွဲတမ်းနှင့် ပေးနေရ ပါသည်။
မိုင်ဂျာယန် ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းမှ ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တွေ့ရစဉ် (ဓါတ်ပုံ-အင်တာနက်)
“ဖူလုံမှုရှိတယ် ဆိုပြီးပြောတယ်၊ ကျနော်တို့မှာ ပေးသလို အစိုးရ ထိမ်းချုပ်တဲ့ စခန်းမှာလည်း အဲဒီလိုဘဲ ပေးတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့မှာက လူတစ်ယောက်ကို တစ်နေ့ကို ဆန် (၂) ပေါင်(၄ဘူးခန့်)၊ ဆီ၊ ဆား ပေးနေတယ်။ ဒါတောင် အခြေခံ ရိက္ခာ အပြင် ဟင်းဖိုးအတွက် တစ်ဦးကို ကျပ် ၃၀၀ ထပ်ဖြည့် ပေးရတယ်။ အဲဒါ အဟာရဖြစ် လောက်တဲ့ ထောက်ပံ့မှု မဟုတ်ဘူးလေ၊ ဒီတော့ အတူတူလောက် ရနေတဲ့ အခြေအနေ ကို မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က လောက်ငှ တယ်လို့ ပြော နေတာဟာ ပေါ်လစီ တခုခု ကြောင့် ဒီစကားကို ပြောနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ”ဟုဒုက္ခသည် စခန်း ကော်မီတီဝင် များက ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော ကော်မီရှင်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအ မေရိကန်သံရုံးသည် ကချင် ဒုက္ခသည်များ အတွက် ဒေါ်လာ သုံးသန်း ထောက်ပံ့ရန် ထုတ်ပြန် ထားပါသည်။ ဤအကူအညီများ သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခွင့်ပြုချက် မရပါက KIO ထိန်းချုပ်သော ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ ရောက်ရှိရန် ခက်ခဲပေလိမ့်မည်။ ဤသို့ကြောင့် KIO ထိမ်းချုပ်သော ကချင် ဒုက္ခသည် စခန်းများ၌ အခြေခံ ရိက္ခာကိုပင် အကန့်အသတ်ဖြင့် ပေးနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရသည် ကချင် ဒုက္ခသည်အပေါ် ကမ္ဘာကရော မြန်မာကပါ အကြောင်းပြချက် ကောင်းအောင်၊ အာရုံ မစိုက်မိအောင် ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ထုတ်ပြန်ခိုင်းဖွယ် ရှိကြောင်း အကဲခတ် များက ဆိုပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 4:08 PM No comments:
Egress ဆိုသည်မှာ အစိုးရ၏ NGO အဖွဲ့ပါ
Myanmar Egress အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အမြန် တည်ဆောက်ရန် အဖြေရှာ လိုပါက ၄င်းတို့ အနေနှင့် အစိုးရ ပေါ်လစီကို အကောင်အထည် ဖေါ်သော NGO အဖြစ်မှ ရပ်ဆိုင်းရန် လိုအပ်သည်ဟု ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည့် ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။
“မြန်မာ အီးဂရက်က ရှင်းရှင်းပြောရရင် အစိုးရဘက်ကို လိုက်နေတဲ့ NGO ပေါ့ သူတို့က အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီမူဝါဒကို ဖြန့်ပေး နေတဲ့ အန်ဂျီအိုပေါ့ အဲလိုဖြန့်ချီပေးတဲ့နေရာမှာလဲ အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ ပါဝင်လာခဲ့လို့ ဒီလိုပွဲမျိုးကို ကျင်းပခဲ့တာပေါ့။ ပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာ အကျိုးအမြတ်တွေတောင် သူတို့ ရရှိလာပါတယ်” ဟုဆိုပါသည်။
အကျိုးမြတ် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ရလာခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးအရ သုံးစွဲနိုင်ခြင်း၊ အီးဂရက်ဌာန ချုပ် သည် တက္ကသိုလ်တစ်ခုသဖွယ် ပညာပေးရေး ဌာနတစ်ခု အဖြစ် တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့သည့် အကျိုးအမြတ်ကို ဆိုလို ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
Myanmar Egress အဖွဲ့သည် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အကြား စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်း ရေး အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်နိုင်ရန် အဖြေရှာသည့် ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့  ပန်ဒါဟိုတယ်မှာ ယမန်နေ့ မနက်ပိုင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ငြိမ်းဖောင် ဒေးရှင်းမှ ဦးဆောင်ပြီး ၂ ရက်တာ ကျင်းပသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံရုံး ဒုတိယ အကြီးအကဲ Mr.Arne Jan Flolo၊ Trans National Institute မှ Mr.Tom Kramer နှင့် မြန်မာအီးဂရက် ဥက္ကဌ ဦးတင်မောင်သန်းတို့ပါ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလို တိုင်းရင်း သား အဖွဲ့အစည်း (၅၇) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နေကြ သော အဖွဲ့အစည်းများ အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ် (၂၀၀) ခန့်တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
သြဂုတ် (၁၃)ရက်နေ့က ပန်ဒါဟော်တယ်၌ ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေစဉ်
ဤသတင်း ထုတ်ပြန်မှုကို ကြည့်ပါက Egress သည် အစိုးရပေါ်လစီကို အကောင်အထည်ဖေါ် နေသော NGO တခုဆို သည်မှာ ထင်ရှားလှသည်ဟု ခွန်ဥက္ကာကဆိုပါသည်။ UNFC သည် တိုင်းရင်းသား အရေးကို တောင်းဆို ရာ၌ မူ(၇)ချက် ချမှတ် ထားပါသည်။ အစိုးရသည် မူ(၈)ချက် ချမှတ်ပြီး နိုင်ငံတော် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်မှု ဗဟိုကော်မီကို သမ္မတ ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
ဤလင့်ထဲ၌ ရှိသော အစိုးရ၏မူ (၈) ချက်ကို UNFC က လက်မခံ သေးပေ။ ဤသို့ကြောင့် Egress ဥက္ကဌ၏ အဆိုပြုချက်သည် လက်တွေ့ မကျသည့်အပြင် အစိုးရ၏ ပေါ်လစီ အတိုင်း ဖြစ်နေပေသည်။ UNFC သည် အစိုးရနှင့် မသက်ဆိုင်သော လွတ်လပ်သည့် တိုင်းရင်းသား ညီလာခံတရပ် ဖြစ်ပေါ်ရေး ကို ကြိုးပမ်း နေပါသည်။
မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးထက် နိုင်ငံရေးအရ စစ်မှန်သော အဖြေရှာမှုသည် သာလျှင် အကောင်း ဆုံး ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ခွန်ဥက္ကာကဆိုပါသည်။
“UNFC ရဲ့7ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှလည်း မဟုတ်ဘူး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ၈ ချက်နဲ့ ကိုက်ညီမှလည်း မဟုတ်ဘူး အဲဒီ ၇ ချက်နဲ့ ၈ ချက်ကို ဘယ်ဟာ လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ဆွေးနွေး တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းဖို့ လိုတယ်။ ဘယ်တော့ ညှိနိုင်းမလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အီးဂရက်က ဦးတင်မောင်သန်း ပြောသလို ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ တွေပေါ်မှာဘဲ မူတည်တယ်လို့ ပြောတာဟာ အစိုးရဖက်ကို လိုက်ပြီး ပြောတာ ဖြစ်တယ်။ ၀ါဒ ဖြန့်တာလည်း ဖြစ်မယ်။ တကယ် တော့ အစိုးရ အဆက်ဆက်ကြောင့် တိုင်းပြည် မငြိမ်းချမ်း တာကိုလည်း စဉ်းစား သင့်ပါတယ်”ဟု ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် UNFC သည် လွတ်လပ်သည့် တိုင်းရင်းသား ညီလာခံ တခုကို ပြည်တွင်း ၌လည်း ကျင်းပ လိုပါသည်။ အစိုးရက ခွင့်ပြုမလား ဆိုသည်မှာ ၄င်းတို့ စေတနာ အပေါ် မူတည် ပါလိမ့်မည်။ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသား ပါတီများ၊ တက်ရောက် လိုသော ပညာရှင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် ပုဂ္ဂိုလ်များမှ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာ သင့်ပါသည်။ ဤညီလာခံမျိုး အစိုးရက ခွင့်မပြုဘူး ဆိုပါက ဘာကြောင့်လဲဟု ကြိုပြီး မေးခွန်း ထုတ်ရ ပါလိမ့်မည်။
ဤလင့်သည် UNFC ၏ လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် KIA အပေါ် အစိုးရ၏ ကိုင်တွယ်မှု သဘောထား အပေါ်မှာသာ မူတည် လိမ့်မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်း ရေးဖြစ်စဉ် ကို အကူအညီ ပေးနေသော နော် ဝေးနိုင်ငံမှ Myanmar Peace Support Initiative (MPSI) က ဆိုပါသည်။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:56 PM No comments:
Monday, 13 August 2012 20:44
အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ထားရှိခဲ့သည့် လက်ရှိ သဘောထားသည် မူဟောင်းများဖြစ်၍ ဆက် လက် ဖိအားပေးနေ ပါက ရရှိထားသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးများသည် ပျက်ပြားသွားနိုင်ဖွယ် အနေအထားရှိ ကြောင်း ညီညွတ်သော တိုင်းရင်သား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာမှ ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာနသို့ ပြောကြား ခဲ့ပါ သည်။
“အစိုးရရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ထားရှိတဲ့ မူ(၈) ချက်ဟာ ဘယ်လိုမှ လက်ခံ နိုင်စရာ မရှိဘူး၊ တရား နည်းလမ်း မကျ ဘူး၊ မျှတမှု မရှိဘူး၊ သူတို့ အတွက် အသာစီး ယူထားပြီးတော့ ကျွှန်တော်တို့ တိုင်းရင်း သားတွေ သူတို့ ကြားကို ဝင်ရောက် စေတဲ့ နည်းဟာ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေ ဘယ်လိုမှ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီမူတွေဟာ မူဟောင်းပါ။ သူတို့က ဒီမူနဲ့ ဘဲ ဆက် လက်တွန်းအား ပေးလာမယ် ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ရှေ့ဆက်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားပါ” ဟု နိုင်ဟံသာမှ ပြောပါသည်။
သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့၌ သမ္မတ အိမ်တော် သဘင်ဆောင်၌ ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး အဖွဲ့ လုပ်ငန်း ကော်မီတီ၏ ၁/၂၀၁၂ အစည်းအဝေး၌ ၄င်းတို့ ချမှတ်ထားသော တိုင်းရင်းသား အပစ်ရပ်အဖွဲ့များလိုက်နာ ရမည့်မူ (၈) ချက်သည် ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ကျင့်သုံးခဲ့သော မူဟောင်းများသာ ဖြစ်သည်ဟု UNFC မှ ရှူ့မြင်ပါ သည်။ ယင်းမူ များသည် မြန်မာ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ထုတ်ပြန် ကြေငြာထားပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ဒု-သမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်းက “ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် နိုင်ရေးမှာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တွေ့ဆုံ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီးရုံမျှဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရပြီဟု မဆိုနိုင်၊ ထိလွယ်ရှလွယ်သော အခြေအနေ ဖြစ်၍ အခန့်မသင့်ပါက အချိန်မရွေး နောက်ဆုတ် ပျက်စီးသွားနိုင်ကြောင်း” ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ဗဟို ကော်မီတီကို ၃/၅/၂၀၁၂ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ် ၁၁/၂၀၁၂ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဗဟိုကော်မီတီ (၁၁) ဦး ပါရှိ ပါသည်။ ထို့အတူ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ ကိုလည်း သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ် ၁၂/၂၀၁၂ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း (၅၂) ဦးရှိပါသည်။ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ များကိုမူ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းမှ တာဝန်ယူ တွေ့ဆုံလျက် ရှိပါသည်။
Custodian of the Two Holy Mosques King Abdullah being received by Crown Prince Salman upon his
arrival in Makkah. (SPA)
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 9:14 AM No comments:
'Many Missing' in Dam Burst
People in China's Zhejiang province expect casualties to mount afteramajor dam collapses.
Rescuers clean up debris afteradam burst near Zhoushan city, Aug. 10, 2012.
Residents of the eastern Chinese province of Zhejiang cast doubts on the official death toll afteralarge dam collapsed on Friday, flooding the surrounding area, as rescuers continue to search for missing people in the wake of Typhoon Haikui.
Official media reported that 10 people had died after the 28.5-meter-high dam burst and loosed the waters of the Shenjiakeng reservoir across countryside near Zhoushan city, with an estimated 27 injuries.
However, the number of casualties could rise further, local people said.
"They haven't accounted for everyone yet,"aresident of nearby Changtu township who declined to be named told RFA. She said the town was full of ambulances and rescue vehicles rushing back and forth.
She added that many people living near the dam had been undocumented migrant workers from inland regions. "Some people were from other provinces; households that we don't even know about."
"I don't think [the rescue effort] is very effective," she added. "It happened very early [this morning] but when people were calling in for help, it seems that people didn't reach them until much later."
"It took them nearly an hour to reach them."
Asked if the authorities had reported the full extent of casualties, she said: "The media is bound to try to suppress this."
Teams of experts were sent to the scene, while local rescue teams vowed "all-out efforts" to locate the missing, the English-language China Daily newspaper reported in the wake of torrential rains which have lashed China's eastern seaboard at the trailing edge of typhoon Haikui.
An employee who answered the phone at the Daishan County People's Hospital said it had been overwhelmed with casualties in the wake of the disaster.
"There have beenavery large number [of casualties]," the employee said, describing their injuries as "all kinds."
"There was one person who didn't make it, but the others are doing OK."
But he declined to give exact details. "If you want to know exactly how many people it was, you'll have to talk to our bosses," he said.
Calls to all other listed numbers at the hospital went unanswered, however.
Photographs of the disaster-hit area in state-run media showed flattened houses and teams of rescue workers forming human chains in waist-deep flood-water.
Zhejiang has been lashed by downpours over the last few days with the arrival of typhoon Haikui, which landed in the province early Wednesday morning, the official news agency Xinhua reported.
Last month, heavy rainstorms and massive floods engulfed the streets of Beijing, killing at least 37 people and stranding tens of thousands of travelers and evacuees who had fled their homes.
The floods sparked allegations that the authorities had tried to cover up the true number of casualties, as well as widespread public anger over the absence of adequate drainage inacity which has promoted itself as world-class.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 8:48 AM No comments:
အသစ် အသစ် အ၇င်ကသူတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ ..ပြောပြောနေကြလိ...
Lata Matut Ndi Ndai Laru Kaba Hpe Jawm Shingla Pad...
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မီရှင်၏ တွေ့ရှိချက် မမှန...
Bringing Myanmar killers to justice tops summit ag...
Interview with Pado David Thar Ka Paul (10-8-2012)
Burma Peace Question: The President, The Soldiers ...
SHARE SHAGAN N'HTOI
INTERVIEW: KBC General Sec. Rev. Hkalam Samson
Eyeing closer ties, India to train Myanmar armymen